people Nepal » के पानी बेसी खानाले किड्नी स्वास्थ्य रहन्छ ? के पानी बेसी खानाले किड्नी स्वास्थ्य रहन्छ ? – people Nepal
के पानी बेसी खानाले किड्नी स्वास्थ्य रहन्छ ?
Posted on October 21, 2017 by Durga Panta
एक जना मान्छेले पनि कति खानु पर्दछ भन्ने कुरामा मान्छेले गर्ने काम, शरीरको बनावट, वातावरण, परीवेस, उसको अवस्था आदिहरुमा निर्भर गरेको हुन्छ। मानिसको शरीरमा पानी कम भएपछि उसलाई प्यास लाग्छ र त्यसलाई निर्धारण गर्ने काम मस्तिष्कमा स्थित तिर्खा केन्द्रले गर्छ। तिर्खा केन्द्रले हामीलाई कहिले र कति मात्रामा पानी खानु पर्छ भनेर बताउछ।